Rwizi Rukuru, zvisikwa uye mavhidhiyo | Absolut Kufamba
maruuzen | 28/06/2021 14:08 | Yakagadziridzwa ku 28/06/2021 15:09 | Kanadha
Kanadha Iyo nyika ine inoshamisa nharaunda, kunyanya kana iwe uchida yemakadhi kadhi nemakadhi, makomo, nzizi nemasango. Nzvimbo yakanyanya kunaka ndeye Rwizi rukuru.
High River inharaunda munharaunda yeAlberta, anenge makiromita makumi mashanu nemashanu kubva kuguta reCalgary, uye inozivikanwa kwazvo nekuti pano mazhinji maTV akateedzana uye mafirimu akatorwa mifananidzo. Ndizvozvo, muRwizi Rukuru pane zvakasikwa uye kutora firimu.
1 Rwizi rukuru
2 Heartland Tour muRwizi Rukuru
Inotumidzwa zita rerwizi runoyambuka nepakati peguta. Vagari vekutanga vekuEurope vakasvika pakatenderedza chikamu chechipiri chezana ramakore rechiXNUMX, ichivandudza zvishoma nezvishoma ruoko ruwoko pamwe nekuwedzerwa kwechitima, asi yakawana kufambira mberi chaiko munguva dzeHondo Yenyika Yekutanga. Panguva iyoyo maindasitiri akagadzwa.
Neraki, uku kukura hakuna kuvharidzira kunaka kwenzvimbo yaro yepamoyo uye yakakosha mamiriro e "Guta diki" kuti haana kumbomusiya. Unogona kuona maRocky kumusoro, uye izvo, hautyaire hafu yeawa kubva kuguta riri padyo.
Muchokwadi, nhasi, kubva kuCargary, maratidziro akarongeka kune ino yakanaka dhorobha inozivikanwa se «Musha we Heartland », chaizvo nekuti ndiyo nzvimbo yekutora mifananidzo yeakanyanya kufarirwa CBC akateedzana: Heartland.
Heartland ndiyo yakateedzana iyo yaita kuti High River ive yakakurumbira. Iwo akateedzana anotenderera nehupenyu hwemhuri yenyika, ayo kukwira nekudzika mune zvekurima, zvemhuri uye zvemwoyo mabasa. Iyo ndeimwe yeCBC inoratidza Yakareba-kumhanya uye kutora firimu kwakakamurwa pakati pemaseti muCalgary neiyo furazi-studio ku Heartland.
Heartland Tour muRwizi Rukuru
Sezvatakambotaura, High River ingori hafu yeawa kubva kuCalgary saka kana iwe uchihaya kushanya kana iwe kuenda wega. Kutora kunoitika kubva Chivabvu kusvika kutanga kwaZvita uye panosvika vanhu veTV, zvese zvinoshandurwa. Nharaunda diki yekutaura ngano inopinda muterevhizheni zvine simba.
Vateveri veHallland vanofanirwa kutanga rwendo rweHudson rwe Highwood Museum. Iyo Visitor Information Center inoshanda mukati meiyamu ino uye munhu wese anoziva nezve kutora firimu kuitira kuti iwe utore mukana uye utaure navo nezve zvakateedzana. Shure kwemuseum yakamirawo Trailers saka kana paine kutora firimu uchaona zvimwe zvinonakidza chiitiko.
Uyezve, iyo mamuseum inoyevedza mukati mawo nekuti inoshanda mukati mekare, nhoroondo yeCanada Pacific Chitima Chiteshi. Uye zvinonakidza zvakare nekuti pane chiratidziro chisingatarise chete paHeartland asiwo pane mamwe mafirimu kana akateedzana mafirimu munzvimbo yakadai Fargo, Chibvumirano kana Kusakanganwirwa.
MuHallland vashanyi vanogona zvakare kuona yakawanda yemapfekero kubva kune akateedzana uye zvakakosha zvinhu munhoroondo, senge imba yedhori kubva mwaka 7. Zvakare, kune vanonyanyisa, pane mubvunzo nemhinduro mutambo unovaisa kune chiratidzo. Uye zvechokwadi, kune chitoro chezvipo kwaunogona kutenga baseball cap, mapepanhau, Kisimusi yemiti yekushongedza nezvimwe.
Imwe block kubva kumuseum ino Vanofamba Western Wear, inotengeswa kupi kutengeswa kwepamutemo kwezvikamusenge sweatshirts, t-shirts kana makarenda. MuOlive & Fincha, chimwe chitoro, ivo vanotengesawo zvinhu zvine chekuita nezvakateedzana, kusanganisira iPhone kesi. Chitoro ichi chiri pa3th Avenue uye uyu mugwagwa unogara uchionekwa munhoroondo yeterevhizheni, saka munhu anonzwa chimwe chikamu zvacho ...
Pamugwagwa uyu zvakare Kudya kwaMaggie, el dhinha yezvikamu. Zviripachena, hazvisi zvechokwadi, asi iwe unogona kugara uchitarisa kunze kwegirazi uye nekuona seti uye kushanda kwayo kwakaomarara. Next door ndeyeBartiling neVanakomana Mercantile uye zvakare Hudson's Antique Mall.Uye nechemberi kweVan Born Travel Agency newindo rayo rinonakidza, rakanakira kutora mifananidzo. Kumhiri kwemugwagwa kune mahofisi eHudson Times uye vanoendesa mapepanhau emahara.
Imwezve block ndeye 4th Avenue. Hezvinoi izvi Kofi yaCollosie, neayo mhizha inogadzira vanilla uye caramel sirasi. Vanofara, vanodaro. Kunze kwemamwe madziro ekunze eresitoreti akapendwa sebhodhi kuitira kuti munhu asiye ndangariro dzavo ipapo. Pedyo necafe iEvelyn's Memory Line, bhawa diki rinoshamisira rinopa ice cream inonaka uye sandwiches ine yakashongedzwa zvekare.
Mushure meizvozvo, hongu, inguva yekuenda kunofamba nemimwe migwagwa. Pane imwe nguva nhanho dzedu dzinotitungamira kuenda George Lane Park, saiti inosarudzwa nechikoro chesekondari kuti vabate mhemberero yavo yekupedza kudzidza, chimwe chinhu chinowanikwa mune dzakateerana TV zvakare. Iyo paki ine yakanaka gazebo uye chikamu chinoshanda senzvimbo yekudzika musasa kwaunogona kudzika tende rako kubva May 1 kusvika Gunyana 30.
Mugwagwa unobuda mupaki iri 5th Avenue uye kumagumo kwawo, wakanangana neiyo nhoroondo Wales Wales Theatre, ndiyo High Rwizi Motor Hotera. Iyo diki uye yakasarudzika motel iyo inoonekwa ese ari maviri akateedzana atanga tichitaura nezvawo uye mune iyo bhaisikopo Fubar. Zvekutora mafoto, zvakakosha.
Kunyangwe Huru Rwizi ichishandiswa zvakanyanya muindasitiri yevaraidzo, chikamu chikuru chekupfura kunoitwa parazi kumavirira kweMillarville. Iyo inzvimbo yakavanzika saka haugone kuiwana, asi Millarville, iri rimwe dhorobha, zvakare rine nhoroondo yaro, uye nekudaro inzvimbo dzayo, zvine chekuita ne cinema neterevhizheni.
Kudzokera kuHigh River uye Heartland imwe Haugone kuenda usina kukwira. Iwo akateedzana epaTV anotenderera nemabhiza saka hazvigoneke kubva pasina kuyedza zvishoma. Saka isu tinogona kuita kumwe kutasva bhiza uye kuva a Cowboy Kwechinguva. Anchor D Outfitting Ranch inopa kutasva bhiza uye kubhadharisa kabhini.
Kukwira uku kwakapetwa kaviri pazuva, zuva rega rega, kune vakuru nevana vane makore matanhatu zvichikwira. Iwo mafambiro anoshanda seshongedzo kuhupenyu hwemombe uye zvakare kuziva hunaku hunhu hwakatenderedza Rwizi Rukuru, maRockies anosanganisirwa.
Saka kana iwe ukaenda kuCanada kana iwe ukatevera dzino dzinozivikanwa nhepfenyuro online, ramba uchifunga kuti iwe unogona kuita kushanya kukuru kune izvi quaint guta reCanada.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Rwizi Rukuru, zvisikwa uye mavhidhiyo
Makomo eAndes muVenezuela